Cylind Tin Can, Tin Can fitoeran-javatra, Metal Ice Bucket, Tinplate Box - Baolai
6.3L peratra vintana Tin Bucket Fa loko, Chemical In ...
2.5L Tin kapoaka ho an'ny sakafo fihinana Grade Oil camelli ...
Azo namboarina, tsy manome fotsiny isika fonosana fitoeran-javatra, dia afaka manatsara kokoa ny kalitaon'ny ny vokatra ho anao, mety ho loko simika, loko, fiara loko, maotera menaka, lubricating menaka, ny ranomainty tins.
Ny entana isan-karazany no tanteraka famaritana, ny toetra tsara indrindra, harafesiny fanoherana, dia manasa anao handray anjara, tsena fampandrosoana sy ny hevitra vaovao.
Nahandro diloilo, menaka oliva tins, ny fampiasana ny sakafo-kilasy tinplate fitaovana, salama, kokoa ny tontolo iainana.
Na inona na inona izay tadiavinao mba hanatratra na mamorona, ny ekipa eo an-tanana mba hanampy. Avy elaborately tins miendrika ho teti-dratsy tsy manam-paharoa.
Dongguan Baolai Metal Can Co., Ltd. naorina tamin'ny 2012, dia ny iray amin'ireo fanta-daza tinplate fonosana fitoeran mpanamboatra ao Shina. Mpandray entana dia: fihinana & simika menaka Can, boribory,-joro sy ny karazana kapoaka, feno karazana sy ny fepetra arahana. Manana ny orinasa matanjaka R & D sy ny teknolojia hery, nandroso fitaovana, manana vondrona matihanina sy ambony ara-teknika mpiasa. 12 Manana fitaovana famokarana nandroso andalana dehibe avy any Alemaina, Japon, Taiwan sy ny firenena hafa, miaraka amin'ny 150,000㎡ atrikasa sy ny fahaiza famokarana isan'andro mihoatra ny 100.000 pcs.
Tin Box , solika Tin Can , Tin kapoaka , Tin Bucket , Tin fitoeran-javatra , Sakafo kapoaka ,